Isku-dubarid Caag ah - Jiangxi Prototek Imp&Exp Co., Ltd.
Prototek waxay keentaa qaybo qaabaysan oo tayo sare leh, baahi loo qabo.
Prototek wuxuu keenaa qaybo qaabaysan oo tayo sare leh, baahi loo qabo. Naqshadeynta cirbadeynta waa habka ugu jaban ee lagu sameeyo qayb caag ah oo miisaan leh iyadoo la siinayo tayada joogtada ah ee wax-soo-saarka mugga dhexe ilaa-sare. Naqshadeynta sidoo kale waxay leedahay kala duwanaanta ugu sareysa ee qalabka, midabada, iyo qaabeynta marka la barbar dhigo mashiinka CNC ama xitaa daabacaadda 3D. Marka laga soo tago walxaha, qaybaha la isku duray waxay yeelan karaan waxyaabo la isku qurxiyo, dhaldhalaalka, ama textures oogada.
Qalabka wax lagu Durayo
Noocyo Caaga ah oo Adag:
Cufnaanta Sare ee Polyethylene (HDPE)
Noocyo Balaastik ah oo Dabacsan oo la heli karo:
Polyethylene Cufnaanta Hoose (LDPE)
La heli karo Noocyo Caag ah oo Caag ah:
Faa'iidooyinka Dubitaanka Duritaannada
Laser Etching xayndaabyadaada la dhammeeyey iyo qaybo leh calaamado iyo calaamado si loo dhamaystiro tusaalahaaga.
Warshadaha adeegsada qaabaynta cirbadeynta
Qaybaha Cnc ee Iibka, Adeegga Cnc ee jaban, Qaybaha Spindle-ka, Qaybaha Saxda ah ee Cnc, Cnc Soo Saaraha Qaybaha Rogsaday, Alaabta Cnc,